यस्तो छ, नेपाली काँग्रेसको पहिचान - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
यस्तो छ, नेपाली काँग्रेसको पहिचान
३= काँग्रेस भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, घुस, कमिशन आदिप्रति अत्यन्त नरम दृष्टिकोण राख्दछ । उ जसरी र जे गरेर भएपनि सम्पत्ति थुपार्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यसैले ठग्ने, लुट्न,े धोखा दिने, बेईमानी गर्ने, घुस, कमिशन खाने उस्को लागि सामान्य कुरा हुन्छन् ।
५. नेपाली काँग्रेस हामीले बिर्ता र जमिन्दारी प्रथा उन्मुलन गर्यौ भनेर गर्व गर्दछ । तर त्यो २०१६ सालमा बी.पी. को सरकारले गरेको काम हो । के अहिले शेरबहादुरको काँग्रेस बी.पी.को काँग्रेस जस्तो छ बी.पी. प्रजातान्त्रिक समाजबाद भन्दथे । तर देउवा काँग्रेस समाजबादको नाम सुन्दैमा मुण्टो बटार्छ । अहिलेको काँग्रेस राजनीतिक र सामाजिक रुपमा सहि अर्थमा यथास्थितिबादी र कतिपय सन्दर्भमा अझ प्रतिगामी पार्टी भई सकेको छ ।
उ कुनै पनि बिषयमा प्रगतिशील परिबर्तनको बिरोधि छ । कमैया र कम्लरी मुक्ति, हलियामुक्ति, सुकुम्बासी समस्याको समाधान, छुवाछुत प्रथाको उन्मुलन आदिको घोषणा गर्न नेकपा -एमालेले काँग्रेससंग कत्रो लडाई लड्नु पर्यो भन्ने कुरा दुनियालाई थाहा छ । उल्टै यी काम हामीले गरेका हौं भन्दा उसलाई रत्तिभर लज्जाबोध हुदैन ।
उसले यी कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, बिश्व बैंक, बिश्व व्यापार संगठन र एशियाली बिकास बैंकबाट सिकेको हो । त्यसैले देशका विपन्न र सीमान्तकृत वर्ग, पछाडि परेको क्षेत्र, भूमिहीन किसान, सुकुम्बासी, मजदुर, दलित आदिको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्ने उसंग न कुनै दृष्टिकोण छ न चाहना नै । साच्चै भन्ने हो भने यदि नेपालमा नेकपा -एमाले_ नउदाएको भए उसले अहिलेसम्म पनि ती वर्ग र तप्काका जनताको उत्थानको निमित्त अहिले भनिए जति कुरा भन्नसम्म पनि सक्ने थिएन ।